Landela esi sikhokelo ukukhetha ngokuchanekileyo iselfowuni yakho entsha ngo-2022 | Iindaba zeGajethi
UJose Rubio | | Iiselfowuni, Umnxeba
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, xa ii-mobiles zazingenakuluncedo ekufowuneni, ukuthumela iiSMS ezingafakwanga kwaye zibekwe ngaphandle kwekhaya lethu okanye emsebenzini, ukukhetha ukuba yeyiphi imfonomfono oyithengayo yinkqubo elula kakhulu. Kwakungekho luhlu lincinci lweemodeli kwimarike, kwaye uninzi lwazo luvumelekile ukuba lwenze ngokufanayo, ngaphandle kwemisebenzi eyahlula ezinye iitheminali kwabanye. Ngokusisiseko, ukhetho lwabo lwalusekwe kubukho kunye nexabiso esizimisele ukulihlawula ngefowuni.
Namhlanje, ngenxa yenani elikhulu labavelisi kunye nezinto zabo ezingaphezulu kwe- Uluhlu olubanzi lweemodeli ezinobungakanani obahlukeneyo, amaxabiso kunye nokubalulwa, kunokuba yinto enkulu yokuthatha isigqibo phakathi kweeterminal ezininzi. Nokuba yeyiphi ngekhamera yayo, iprosesa yayo, ubungakanani okanye umgangatho wesikrini sayo kwaye nangenxa yohlobo lwayo, siyaphambana ngalo lonke ixesha sifuna Hlaziya ifowuni yethu. Kwaye njengoko sisenza rhoqo nangakumbi, sikushiya Isikhokelo ngamanqaku ekufuneka sithathele ingqalelo ukwenza ukhetho lwakho lube lolulungileyo Xa kufika ixesha. Ngaba ungahamba nathi?
Ukuba sibuyela phakathi kwiminyaka yee-90s, ii-mobiles zokuqala ezazinokufikelelwa ngummi oqhelekileyo zazisele ziqala ukubonwa ezitalatweni, nangona kwakungekade kubeyinkulungwane yama-2004, xa abaqhubi baqala ukunikezela ngeetheminali zabo ngenkqubo amanqaku xa ukusetyenziswa kweefowuni eziphathwayo kuye kwasasazeka ngokubanzi. Ngo-XNUMX, umzekelo, kunqabile ukuba babengenafowuni yokufowuna kwaye bafowunelwe ngaphandle kokuba besekhaya okanye eofisini.
Ngelo xesha ikhathalogu yayincinci kakhulu, njengokusetyenziswa okunikwe iselfowuni. Kodwa kule minyaka idlulileyo, zombini ezi zinto zixabisekileyo zandisiwe, zada zafikelela ngoku, apho iifowuni eziphathwayo zinescreen phantse kuwo wonke umhlaba, kwaye ziikhompyuter ezinokuthi siziphathe entendeni yezandla zethu, zixhume ngokusisigxina kwi-intanethi, kwaye esinokuthi ngayo senze imisebenzi engathethekiyo kwiminyaka nje elishumi eyadlulayo.
Kwaye ngenxa yenani elikhulu lemisebenzi esinokuyenza namhlanje, kunye nokwahluka okukhulu kwintengiso, masiqwalasele ekusebenziseni esifuna ukunika ifowuni. Ayifani nokuthenga iselfowuni kumntu oneminyaka engama-20 ubudala, olona lusetyenziso luphambili iya kuba kukuzonwabisa, kufuna ukuzimela okwandisiweyo, kunabantu abadala abangahambelaniyo netekhnoloji, bekhangela iselfowuni yokufowuna nokwenza iifoto ezingapheliyo, kwaye ujonge ukusetyenziswa ngokulula.
1 Into ephambili: uhlahlo lwabiwo-mali.
2 Masiqhubeke nescreen.
3 Masingakulibali ukusebenza.
4 Ibhetri engapheliyo
5 Ikhamera enyanzelekileyo.
6 Idabi elingenasiphelo: inkqubo yokusebenza.
Into ephambili: uhlahlo lwabiwo-mali.
Eyona nto ibalulekileyo kunye neyokuqala ekufuneka siyithathele ingqalelo xa uthenga iselfowuni yile uhlahlo-lwabiwo mali esinalo. Ukuba umda wethu uyi- € 200, iya kuba bubudenge ngathi ukukhangela uluhlu oluphezulu, njengoko siza kuqala ukufumana iinketho kumda wexabiso esingenakufikelela kuwo. Olu kuphela kokwahluka okuguqukayo kuxhomekeke ekubeni sijonge i Isiphelo sesibini okanye esitshaInokuba kunjalo imeko yokufumana i-smartphone kunye neminyaka embalwa yokuphela okuphezulu, ngexabiso lebanga elitsha eliphakathi okanye kwanoluhlu olusisiseko.
Nje ukuba sicacelwe malunga nokuba singachitha okanye sifuna ukusebenzisa malini, siya Inyathelo elilandelayo: isikrini. Namhlanje, ubungakanani bescreen ngu ngokuthe ngqo kubungakanani beselfowuni, kuba bahlala phantse kuyo yonke indawo ngaphambili kwesixhobo. Kungenxa yoko le nto, ukuba sifuna isikrini esikhulu, Siza kuba ngamagqwetha ukuze sibenayo i-terminal ngaphezulu komhlaba, kunye ukungonwabi ukuphatha ngesandla esinye, esiya kusikhathaza ngakumbi xa kuziwa ekubeni nayo epokothweni, njalo njalo. Apha siqala ukuchaza usetyenziso esiza kulinika i-terminal.
Ukuba sikhangela i-smartphone eyinjongo yayo yokuqala dlala umxholo wemultimediaa, njengeefoto, iividiyo okanye iimovie, ngaphandle kwamathandabuzo isikrini esikhulu siya kuba kuhle kuthi ngayo. Nangona kunjalo, ukuba sele sinayo ithebhulethi yayo, Mhlawumbi yinto yesibini kwaye itheminali encinci kunye nentofontofo iya kwanela, ukuncama ubungakanani bescreen ukulungiselela ukusetyenziswa ngokulula. Ukongeza kubungakanani, kufuneka sinikele ingqalelo ekhethekileyo kuyo sigqibo kunye neteknoloji yayo. Eyona nto ifanelekileyo? Ubuncinci, isisombululo esipheleleyo se-HD, kunye netekhnoloji ye-LED. Ngale ndlela, siya kuba nomgangatho ophezulu wesikrini entendeni yesandla sethu.
Ukuba sifuna ukuthenga i-smartphone entsha yokuhlaziya iselfowuni yangoku, esinye sezizathu eziphambili kukuphucula ukusebenza esikufumanayo kuyo. Mhlawumbi iphelelwe lixesha, isebenza kancinci, okanye sifuna ukuyihlaziya ukuze ibe nakho ngakumbi. Abo bajongene nokuqinisekisa ukuba singayenza imisebenzi esiyifunayo iya kuba ngabo iprosesa kunye ne-RAM. Kungenxa yoko le nto kufuneka sibakhethe ngokuchanekileyo, ukuze singashiywa nesixhobo esiphelelwe lixesha kwiinyanga nje ezimbalwa ukufaka iprosesa yesizukulwane esidlulileyo.
Ngaphandle kokuba ziingcali kwicandelo, njalo sinokukhokelwa linani lamakhonkco kunye nesantya sewotshi, Thelekisa phakathi kwezixhobo ezahlukeneyo. Kule mihla, kunqabile iselfowuni engenayo iprosesa engundoqo yesine. Ewe, ngaphezu kweekhompyuter ezininzi. Masingakulibali Imemori ye-RAM, njengoko inoxanduva lweenkqubo ezingasemva ezinokuthi ziqhubeke ukwenziwa, kunye nokusilela kwayo linoxanduva lwengozi ezininzi kunye nokuxhoma xa utshintsha usetyenziso, umzekelo. Namhlanje, ngokupheleleyo ngo-2019, ngaphantsi kwe-2Gb ye-RAM eseleyo iminyaka embalwa, nangona ngaphezulu kokumisela ubuncinci benani, Sikucebisa ukuba uthelekise idatha yezixhobos phakathi kwabo bathandabuzayo ukufumana isigwebo esixhasa enye okanye enye.
Ngaphakathi kwintsebenzo singabandakanya ukugcinwa. Ukuba uhlala une Inani elikhulu leefoto kunye neevidiyo, iiapps ezimbalwa, kwaye awuthandi kuxhomekeka kwilifu, ngaphandle kwamathandabuzo uzakufuna umthamo ongaphezulu wokugcina kwiselula yakho. Ngakolunye uhlangothi, ukuba amaxwebhu akho uwaququzelele efini okanye awudingi ukuba nawo ngalo lonke ixesha, kwaye kaninzi awugcini umxholo omninzi wemultimedia, imodeli enendawo encinci yememori iya kudibana iimfuno zakho.
Ukuba kukho into esiyiphosayo kwii-mobiles zangoku, yibhetri. Ngawaphi amaxesha apho besibiza iNokia yethu kwaye sinokuyisebenzisa ngaphezulu kweveki ngaphandle kokuqonda ukuba sineplagi ekufutshane. Nangona kuyinyani ukuba oku kubangelwa kukunyuka kwamandla kunye nobungakanani bezikrini kunye nokusetyenziswa okufunekayo, inani elikhulu leeyure esizisebenzisayo linciphisa kakhulu ixesha labo. Umthamo webhetri Ilinganiswa ngeeyure ezingama-amp, kodwa kwiibhetri ezincinci njengezo ze-smartphone yayo, i- iyure ye-milliamp (mAh). Okungakumbi mAh, kokukhona iya kugcina imithwalo, kwaye ixesha elininzi lokufunda esinokulifumana.
Kwaye ewe, sithetha malunga nexesha lethiyori kuba ngomthamo webhetri ofanayo, sinokufumana iimodeli ezinentlawulo epheleleyo ihlala ixesha elide kunabanye. Oku ikakhulu kungenxa ye- ukusebenza kweprosesa yakho, kunye netekhnoloji kunye ubungakanani bescreen sakho. Okukhulu kokugqibela, kokukhona umphezulu kuya kufuneka ukhanyise, kokukhona kuya kufuneka kuboniswe iipikseli, kunye namandla ngakumbi aya kufuna ukwenza njalo. Iprosesa esebenzayo ngakumbi ikwadlala indima ebalulekileyo ekugcineni amandla, usebenzisa amandla amancinci ukwenza imisebenzi efanayo.
Kubonakala ngathi namhlanje asinakuphila ngaphandle kwefoto kunye nevidiyo yekhamera edityanisiweyo kwiselfowuni. Kwaye kwezinye iimeko, ngaphandle kweekhamera ezimbini okanye ezintathu. Ewe, njengoko ufunda, sele kukho iifowuni eziphathwayo ezineekhamera ezintathu ezakhelweyo. Ukuba usetyenziso oluya kulinika i-smartphone yakho entsha luya kugxila kulonwabo okanye nkqu fI-otography yobungcali, ngokuqinisekileyo uthembele ikhamera elungileyo ebonakalayo kwabanye iya kuba yimfuneko. Nokuba ii-smartphones ezisezantsi ezisezantsi zinekhamera engaphezulu kwesidima Ubuncinane zii-megapixels ezisi-8 kunye nomgangatho ongaphezulu kokuhlangabezana nokulindelweyo kuninzi lwabasebenzisi.
Nangona ulumkile, sukujonga kuphela kumanani ahamba nee-megapixels, kuba oku kubonisa isisombululo sayo kuphela. Oko kukuthi, ubungakanani bomfanekiso ngaphambi kokuba uqale ukuphulukana nomgangatho okanye ube yi-pixelated. Njengokuba kubaluleke kakhulu ukwazi ubungakanani bazoNgenxa yokuba phezulu kunjalo, ukukhanya ngakumbi siya kuba nakho ukubamba, sithathe iifoto ezingcono ekukhanyeni okuphantsi. Uhlobo lwekhamera lubalulekile, ngakumbi kwimeko yokuba neekhamera ezimbini okanye nangaphezulu, kuba uninzi lwamatyala oku kungenxa yokuba Inzwa inoxanduva lokuthatha iifoto eziqhelekileyongelixa enye inokusondeza okukhulu evumela ukuba isebenze njengelensi yemfonomfono, ifake ngcono imifanekiso yezinto zomgama omde.
Idabi elingenasiphelo: inkqubo yokusebenza.
Kodwa ngaphezulu kwayo yonke loo nto, umahluko oko Iya kukwenza ukhethe uhlobo olunye lwe-smartphone okanye enye iya kuba yinkqubo yakho yokusebenza. Kwi-Android kukho iindidi ezininzi ngakumbi izixhobo, njengoko zifakwe kumgangatho oqhelekileyo kwiitheminali zoluhlu olubanzi lweemveliso. Okwangoku, Ukuba sijonge i-iOS, asinakukhetha ngaphandle kokukhetha iApple kunye ne-iPhone yayo. Nokuba kungenxa yokukhetha enye okanye enye evumayo, iyantlukwano kwinqanaba lomdibaniso okanye ngenxa yokuba siqhele enye okanye enye, kwiimeko ezininzi kuya kubakho ukuqhubeka kwinkqubo yokusebenza.
Ngaphandle kokungafaniyo okuninzi kuthintela ukhetho esinokukhetha kulo, silushiye okokugqibela, ukusukela sineendlela ezimbini zokukhetha. Nje ukuba ukhethe inkqubo yokusebenza esiyithandayo kakhulu, ngoku sinokuthelekisa ukhetho ngalunye olulungele iimfuno zethu.
Njengokuba ubona, Akukho mfuneko yokuba ube yingcali yokutshintsha iselfowuni kwaye uyenze ngokuchanekileyo. Imalunga nje uhlalutye ngononophelo iimfuno zakho, kwaye ukhethe ifayile ukubaluleka kunikwe umahluko ngamnye Ngale ndlela, ukuze ubenakho ukufikelela kwisixhobo esifanelekileyo, esingoyena mntu ngaphandle kwesona silungele thina. Ngalesi sikhokelo Ndiqinisekile ukuba inkqubo yotshintsho yeselula ilula kakhulu kuwe Ke, nokuba uza kuhlaziya isixhobo sakho okanye ukuba uza kusishiya ixesha elizayo, ungalibali la manqaku, aya kuba ngaphezulu kunokuba luncedo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Landela esi sikhokelo ukukhetha ngokuchanekileyo iselfowuni yakho entsha
Okungafakwanga kwe-Samsung Galaxy S10 kubhengezwe ngokusesikweni ngoFebruwari 20